XOG CUSUB OO HADA SOO GAARTAY RQ : M/weynaha Somalia oo casumaad deg deg ah u fidiyey Madaxda D/gobaleedyada ee dhawaan soo saaray go’aamada? – RadioQandala.com
XOG CUSUB OO HADA SOO GAARTAY RQ : M/weynaha Somalia oo casumaad deg deg ah u fidiyey Madaxda D/gobaleedyada ee dhawaan soo saaray go’aamada?
WAA XOG HADA SOO GAARTAY RADIOQANDALA.COM : Madaxweynaha dawladda Faderaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa casumaad u diray dhamaan Madaxda dawlad gobaleedyada xubinta ka ah dawladda Faderaalka, waxaana lagu casumay in ay iskugu yimaadeen shir ka dhaca magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka jawaabaya baaqii Madaxda dawlad gobaleedyada ee Kismaayo ayaa sheegay in loo baahan yahay midnimo iyo wadashaqeyn ayna taasi ku imaan karto, iyadoo laga wada hadlo waxyaabaha hadda taagan.
Wasiirka Warfaafinta iyo Hanuuninta ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Osman Yariisow ayaa sheegay in casumaaddan si rasmi ah loogu diray Madaxda dawlad gobaleedyada oo dhan, ayna imaan doonan magaalada Muqdisho.
Shirkan ayaa horey ay u baajisay dawladda Faderaalka, waxaana qorshuhu ahaa in la qabto bilowgii bishan October, iyadoo ay xubno katirsan Xaafiisyada Madaxtooyada ay diidanayaan in loo yeero dawlad gobaleedyada.
Hogaamiyaasha dawlad gobaleedyada xubnaha ka ah dawladda Faderaalka ayaa welwel weyn ka muujiyey hanaanka siyaasadda dalku ay ku socoto shirkoodii magaalada Kismaayo, waxayna ugu baaqeen Madaxda dawladda Faderaalka in ay eegaan xaaladdaha hadda taagan.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda u muuqda mid si wanaagsan uga jawaabay baaqaas ka soo yeeray Kismaayo, laakiin Raysalwasaarihiisa ayaa ku faraxsaneyn talaabada uu qaaday Madaxweynaha dalku.
Lama garanayo waxyaabaha ka soo bixi doona shirka magaalada Muqdisho, kaas oo aan la aqoon waqtiga uu qabsoomi doono, laakiin ay warar madax banaan sheegayaan in la qabanayo todobaadka nagu soo beegan.
« DHAGAYSO : Culumada Puntland oo fariin kulul u diray Madaxda D/gobaleedyada, DFS & Shacabka Soomaaliyeed.
Ra’iisulwasaaraha XFS Kheyre Oo Si Kulul Uga Hadlay Qarixii Muqdisho, Baaqna Deg Deg Ahna U Diray »